Ahoana ny fomba hamoronana sy fanampiana sonia manokana ao amin'ny Mail amin'ny OS X | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba hamoronana sy fanampiana sonia manokana ao amin'ny OS X Mail
Ity dia zavatra mety mahasoa ho an'ny mpampiasa maro izay mampiasa ny mailaka tompon-tany mailaka ary te-hamela marika famantarana amin'ny endrika sonia ao amin'ny mailak'izy ireo. Misy safidy sy fahafaha-manao maro hamela sonia isaky ny mailaka alefanay, noho ireo tompon'andraikitra mailaka manolotra ny safidiny (Gmail, Outlook ...) fa raha mpampiasa OS X ianao ary manana Mail ianao fampiharana mailaka fitantanana anio ampianarinay anao ny fomba fampidirana sonia avy amin'ny fampiharana.
Ity dingana ity dia tena tsotra hanatanterahana ary afaka manampy rohy mankany amin'ny tranonkalantsika na tambajotra sosialy mora foana izahay, fa anio sy hanombohana dia ho hitantsika ny fomba famoronana sy fanampiana sonia natao manokana miaraka amin'ny lahatsoratra fotsiny nefa tsy manampy sary, hyperlink na hyperlinks.
Amin'izao aloha ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia sokafy ny mailaka fampiharana ary sokafy ny Prefers ao amin'ny menio fampiharana:
Raha vao eo amin'ny safidintsika isika dia handeha amin'ny safidin'ny sonia ary eto no hanampiantsika ny sonianay manokana hampidirina amin'ireo mailaka. manomboka tsindrio ny marika + ary hanitsy ny lahatsoratray izahay:
Amin'ity tranga ity dia efa namorona sonia azoko jerena amin'ny anarako aho, saingy hamorona antso vaovao izahay: SOYDEMACPRUEBA. Tsindrio ny + ary soratanay aminay ny anarana izay hampiasainay hanaovana sonia. Vantany vao noforonina ilay anarana, dia mitoetra fotsiny ny manampy ny lahatsoratra amin'ny boaty mety araka izay tadiavintsika:
Raha te hampiasa ny sonia amin'ny kaonty samihafa izahay, ny hany zavatra tokony hananantsika dia ny manamboatra ny Mail ho an'ireo kaonty ireo ary tariho mivantana ny anaran'ny orinasantsika amin'ny mailaka Tianay hiseho izany. Amin'izany fomba izany, isaky ny manoratra mailaka avy amin'ny Mail isika dia apetraka ho azy ny sonia. Mba tsy hahitana azy eo ambonin'ny lahatsoratra na atin'ny mailaka, dia mamporisika anao aho hamela toerana iray (amin'ny alàlan'ny fanindriana hiditra indroa) rehefa mamorona ny sonia ao amin'ny Prefers Mail izahay.
Azonao atao ny mamorona sonia hafa ho an'ny kaonty rehetra namboarina tao amin'ny Mail. Raha te hamafa sonia noforonina izahay mila miakatra fotsiny ianao dia tsindrio ilay bokotra - ka io no hofoanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hamoronana sy fanampiana sonia manokana ao amin'ny OS X Mail
Francisco Star dia hoy izy:
Salama, misaotra an'ireo fandraisana anjara ireo.
1- Te-hanamarina an'i Apple aho, ahoana no anaovako azy?
2- Mila fampiharana ve aho hanesorana ny lakile ao amin'ny BD ao amin'ny Filemaker?
Valiny tamin'i Francisco Estrella
Nilaza i Microsoft fa manao zavatra betsaka kokoa noho ny Mac ny solosaina Windows 10
Japon sy Brezila koa dia handray Apple Pay amin'ity taona ity